Thursday October 27, 2016 - 10:21:36 in Sports by Super Admin
Kadib markii la soo gabagabeeyay kulamadii wareega 16 ka kooxood ee Leaque Cupka ayaa la sameeyay isku aadka wareega sideed dhamaadka iyada oo ay wareegan u soo gudbeen kooxaha Liverpool, Arsenal iyo Manchester United halka kooxaha Chelsea iyo Manche
Kadib markii la soo gabagabeeyay kulamadii wareega 16 ka kooxood ee Leaque Cupka ayaa la sameeyay isku aadka wareega sideed dhamaadka iyada oo ay wareegan u soo gudbeen kooxaha Liverpool, Arsenal iyo Manchester United halka kooxaha Chelsea iyo Manchester City ay ku hadheen kulamadii West Ham United iyo Manchester United.
Waxa kale oo wareega sideed dhamaadka u soo baxay kooxaha Hull City, leedas, Newcastle United iyo Southampton. Ka hor intii aan isku aadka la samayn kooxaha waa wayn ayaa rajaynayay in ay kala badbaadaan isla markaana ay kulamada sidee dhamaadka ku aadaan kooxaha kale.
Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawayn doonta kooxda Leeds kulanka afar dhamaadka halka si la mid ah Manchester United ay Old Traffrod ku marti qaadi doonto kooxda West Ham United. Sidoo kale Arsenal ayaa Emirates Stadium ku soo dhawayn doonta kooxda Southampton.
Kooxaha waa wayn ee Liverpool, Man United iyo Arsenal ayaa ugu yaran kala badbaaday wareega siddeed dhamaadka iyaga oo fursad u haysta in ay afar dhamaadka iskugu wada iman karaan.
Kulamada sideed dhamaadka Leaque Cupka ayaa la ciyaari doonaa todobaadka ka bilaamaya November 28, waxayna markale kooxahani u tartami doonaan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen wareega afar dhamaadka oo ay talaabo ugu jirsan doonaan finalka Wembley Stadium.